မည်သည့်တီဗီ ၀ ယ်ယူရမည် (ရွေးချယ်ရန်အကြံပြုချက်များ) | Gadget သတင်း
ဘယ် TV ကို ၀ ယ်ရမလဲ (ကောင်းကောင်းရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုချက်များ)
ဟိုဆေး Alfocea | | တီဗီများ
ငါငယ်ငယ်တုန်းကငါမဟောင်းသေးဘူးလို့ကျိန်ဆိုပြီးမုသာမပြောခဲ့ဘူး၊ ငါ့အိမ်မှာအဖြူရောင်တီဗွီ၊ ခလုတ်တွေမပါဘဲဘီးပါ ၀ င်ပြီးသင်က "ပထမကွင်းဆက်" နှင့် "ပထမသံကြိုး" နှင့် စပိန်ရုပ်မြင်သံကြား၏ဒုတိယကွင်းဆက်»။ ပုဂ္ဂလိကရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများ၊ လေကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကေဘယ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Movistar၊ Netflix နှင့်အခြားမည်သည့်အရာမျှမိုင်ပေါင်းများစွာအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ ဒီတော့ရုပ်မြင်သံကြားတွေဟာဒီအတိုင်းသာဖြစ်သင့်ရုံတင်မကဘူး၊ မင်းမှာဘာတီဗွီရှိလဲအရေးမကြီးဘူးသူတို့တီဗီမှာပြနေတာပဲ!
သို့သော်နှစ်များကုန်လွန်သွားပြီ၊ နည်းပညာများပြောင်းလဲလာသည် ရုပ်မြင်သံကြားဝယ်တဲ့အခါအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်မာစတာတစ်ယောက်လိုလေ့လာဖို့လိုတယ်အလေ့အကျင့်များနှင့်အတူ။ LCD သို့မဟုတ် OLED မျက်နှာပြင်လား ကွေးနေလားဒါမှမဟုတ်မျက်နှာပြင်ပြားလား။ HD, 4K? အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသလားသို့မဟုတ်မရှိသလား။ Smart TV လား။ ထိုအ connectors ကော? ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုမျိုးရှိသင့်ပြီးဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတွေနဲ့အတူစီစဉ်ဖို့ကြိုးစားမယ့်တကယ့်ရှုပ်ထွေးမှု တီဗီကောင်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့အကြံပေး.
1 LED သို့မဟုတ် OLED? ဤတွင်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်
2 အရွယ်အစားနှင့် resolution
5 3D လား
LED သို့မဟုတ် OLED? ဤတွင်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်
ရွေးချယ်ဖို့ ဘာတီဗီဝယ်ရမလဲကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီအသစ်၊ LED (သို့) OLED ရှိမည့် panel အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့ စတင်၍ စတင်မည်။ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြင့် OLED နည်းပညာသည်“ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသော LED” နှင့်တူသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားအကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်ကိုထိုအချက်၌တွေ့ရသည် OLED panel များသည် backlighting systems များကိုမသုံးပါ အဲဒီအစားသူတို့ဟာ pixel တစ်ခုချင်းစီကိုတစ် ဦး ချင်းစီအဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆန့်ကျင်ဘက်၊ ပိုမိုကြီးမားသောအရောင်အဆင်း၊ သန့်ရှင်းသော၊ ပိုမိုပြင်းထန်သောနှင့်လက်တွေ့ကျသောလူမည်းများ၊ ပိုမိုကြီးမားသောအရိပ်အသေးစိတ်များ…။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, OLED ပြားနှင့်အတူတီဗီဖြစ်ကြသည် ပါးလွှာပေါ့ပါးပေါ့ သို့သော်၎င်းတို့တွင်သိသာထင်ရှားသောအားနည်းချက်များရှိသည်။
OLED တီဗီများ သူတို့ကပိုစျေးကြီးတယ် LED တီဗီများထက်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းသည်ယူရို ၁၅၀၀ မှ ၁၇၀၀ ကြားတွင်ရှိသည်။
55 လက်မထက်သေးငယ်မော်ဒယ်များမရှိပါ ထို့ကြောင့်၊ သင်ပိုမိုသေးငယ်သောတီဗွီကိုလိုချင်သည်ဆိုပါကသင်ဤနည်းပညာကို ရွေးချယ်၍ မရပါ။
သို့တိုင် ပုံရိပ် "retentions" သို့မဟုတ် "burnouts" ခံစားရ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖော်ထုတ်လျှင်၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်ရန်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမဟုတ်ပါ။
တီဗီအသစ်ဝယ်တဲ့အခါ ရုပ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပေါင်းစပ်။ ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားကိုနေရာချမည့်နေရာနှင့်တီဗွီကိုကြည့်မည်ဆိုပါကအကွာအဝေးနှင့်ပတ်သက်သည်။ ဒါပေမယ့်အပိုင်းပိုင်းလိုက်ကြရအောင်
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် living ည့်ခန်းနှင့်အိပ်ခန်းတို့တွင်အကျယ်တ ၀ င့်ရှိပြီး resolution အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင် သ၍ ထိုတွင်အကြီးဆုံးရုပ်မြင်သံကြားကို ၀ ယ်ရန်သွေးဆောင်ခံရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, resolution, အရွယ်အစားနှင့်ကြည့်ရှုအကွာအဝေး, တသမတ်တည်းဖြစ်ရမည်။ ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အတှေးအချေါမြားစှာရှာတှေ့နိုငျပါသညျ၊ Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society ကဒီအကြောင်းကိုတစ်ခုခုသိလိမ့်မယ်လို့ငါဘာပြောသလဲ။
resolution နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားသည် Full HD ကို (1920 × 1080 pixels) ကြည့်ရှုသည့်အကွာအဝေးသည်အစု၏အကျယ်နှစ်ဆမှငါးဆကြားရှိသင့်သည်။
resolution နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားသည် UHD (၃၈၄၀ × ၂၁၆၀ ပစ်ဇယ်လ်) သို့မဟုတ် 4Kမြင်ကွင်းအကွာအဝေးသည်တစ်ဝက်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာတီဗီ၏ကိုယ်ပိုင်အကျယ်နှင့် ၂.၅ ဆခွဲခြားသည်။
ထို့အပြင်၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည် ကြည့်ရှုထောင့် ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် TV ကိုနေရာတနေရာနဲ့တနေရာတည်းမှာဘယ်သူအမြဲကြည့်နေတာလဲ။ တခါတရံငါဆိုဖာ, တစ်ဖက်သို့မဟုတ်အခြား, ဒါမှမဟုတ်ဆိုဖာ၏တ ဦး တည်းရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်သောလက်တင်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတယ်, ငါပင်ဘယ်လောက်အကြိမ်ငါကုလားထိုင်၌ထိုင်ဘယ်လောက်ငါ့ကိုပြောပြကြပါဘူး။ ဒီတော့ဒါကိုထူထပ်တဲ့ဖုံးအုပ်ထားကြစို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်အသစ်ကို ၀ ယ်သောအခါအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်အလွန်အရေးကြီးသည် el သင်ရှိသည်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားနှင့်သူတို့၏နံပါတ်, နောက်မှကျွန်တော်တို့ DVD player တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ချင်တယ်၊
ပထမ ဦး စွာသင်၏တီဗီအသစ်နှင့်ချိတ်ဆက်လိုသည့်အိမ်ပတ်လည်ရှိပစ္စည်းများကိုသွားကြည့်ပါ။ အလေးအနက်ထားလုပ်ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကိုအမြဲမေ့လိုက်လို့ပါ
စကြရအောင် HDMI port များကွန်ပျူတာ၊ Apple TV၊ Chromecast နှင့်အခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့သော devices များနှင့် Blu-Ray player အတွက်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ ဗားရှင်း ၁.၄ ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြည့်လျှံနေပြီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကအနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်လိုပါက၎င်းတွင် HDMI 1.4a နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော connector တစ်ခုနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ကာကွယ်မှုစံ HDCP 2.0 တွင်လည်းမပါစစ်ဆေးပါ။
ရန်အဖြစ် အင်တာနက်ကိုသင်ပေးမည့်အသုံးပြုမှုကိုစဉ်းစားပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်ပြင်းထန်သော (သို့) မဟုတ်သည်ကိုစဉ်းစားပါ။ Full HD TV တစ်ခုအတွက် Ethernet connector သည် ၁၀၀ Mbps သို့မဟုတ် WiFi connection N 100 or 150 Mbps ဖြင့်လုံလောက်ပါသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည် 300K ရုပ်မြင်သံကြားစက်ကိုသွားလျှင်ဤအရည်အသွေးနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများစွာကိုတွေ့မြင်လျှင်၊ အကောင်းဆုံးကတော့ connection ports များသည် Gigabit Ethernet နှင့် WiFi connection AC ဖြစ်သည်။
အာ ၎င်းတွင်ရှိသည်ကိုမမေ့ပါနှင့် USB port များ သင်၏ရုပ်ရှင်နှင့်အတူ pendrive တစ်ခုသို့မဟုတ် external hard drive တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်၊ ကီးဘုတ်၊ မောက်စ်ကဲ့သို့သောအရံပစ္စည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားစက်၏နည်းပညာနှင့်အရွယ်အစားနှင့် resolution တို့၏ရွေးချယ်မှုများကိုလည်းရွေးချယ်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည့်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးရှိသည်ကိုသတိပြုမိသည်၊ ထို့ကြောင့်ရွေးချယ်မှုများ၏ကြီးမားမှုသည်လျှော့ချနေပြီးယခုအခါတွင်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကပြားချပ်ချပ်ဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်ကွေးမျက်နှာပြင်များအကြားကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒါဟာပို။ ပင်ပြုလိမ့်မည်။
ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ရုပ်မြင်သံကြားများသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ သီအိုရီအရ, အတွေ့အကြုံအများကြီးပိုကောင်း; ရုပ်မြင်သံကြား၏ဗဟိုနှင့်ဆက်စပ်နေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့မျက်လုံးနှင့်စက်ပစ္စည်းအကြားအကွာအဝေးသည်အချက်တစ်ချက်စီတွင်အမြဲတမ်းအတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်ပါ ၀ င်မှုတွင်ပါ ၀ င်မှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ panel ၏တစ် ဦး ချင်းစီအချက်မှာ။ ထိုအချက်သည်၎င်း၏အားနည်းချက်များအနက်တစ်ခုမှာတည်ရှိသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်နေရပါကပုံရိပ်အရည်အသွေးသည်အတူတူမဟုတ်တော့ပါ ဒါ့အပြင်သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တီဗွီတစ်ခုတည်းကိုသာအမြဲမကြည့်ပါကပုံမှန်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ထင်ဟပ်သာ။ ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည် အထူးသဖြင့်အလင်းနှစ်ဖက်မှတစ်လုံးမှလာလျှင်အထူးသဖြင့်အလင်းရောင်သည် Flat မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။
ထိုကွောငျ့, ကွေးနေသောတီဗီကိုမရွေးချယ်မီသင်မြင်ရမည့်အကွာအဝေး၊ အလင်းရောက်ရှိမည့်နေရာနှင့်သင်တစ် ဦး တည်းသို့မဟုတ်လူအများအပြားနှင့်အတူလိုက်ပါသွားမည့်အရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်.
ငါဟာ 3D ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ အနည်းဆုံးသူတို့ကသူတို့ကိုဒီနေ့ရောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ 3D ကိုမဟုတ်ဘူး။ The အကြောင်းအရာရှားပါးမှု ကိစ္စရပ်များစွာတွင်အရည်အသွေး၊ ပုံစံများအကြားသဟဇာတ နှင့်သင်တန်း၏, အချို့ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စျေးနှုန်းများချဲ့ကားပြောဆိုမှုများအထက်ပါအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်သည် 3D TV ကိုမသွားရန်တိုက်ရိုက်အကြံပေးခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏အနာဂတ်ပင်လျှင်ယခုအချိန်တွင်မေးခွန်းထုတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
Smart TV ပလက်ဖောင်းပါတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွေကိုကျွန်တော်သိပ်မကြိုက်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုးတက်မှုတွေရှိပေမဲ့သူတို့ဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့အပြစ်ပြုနေတုန်းပဲ။ နှေးနှေး, reboots လုပ်တယ်တစ်သက်တာကြာသောအက်ပ်များ၊ မျှော်လင့်မထားတဲ့ပိတ်, သဟဇာတ နှင့်အဆုံး၌, စိတ်ပျက်လေ့လေ့ကျင့်သော။ ကျွန်ုပ်အကြံပေးလိုသည်မှာသင်သည် "smart" မဟုတ်သောတီဗီတစ်လုံးကိုဝယ်ယူပြီးသင်၏အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ Apple TV သို့မဟုတ် Chromecast သို့မဟုတ်အလားတူအရာတစ်ခုနှင့်အတူလိုက်ပါရန်ဖြစ်သည်။
သို့တိုင်ယနေ့ အဓိကပလက်ဖောင်းများမှာ FireFox OS၊ webOS, Tizen နှင့် Android TV တို့ဖြစ်သည်.
သော့ချက်ကဒီ Smart TV ပလက်ဖောင်းကိုသင်၏ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်၎င်းအားမောင်းနှင်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲတွင်မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်စဉ်းစားကြည့်ပါ ဦး - ရုပ်မြင်သံကြားစက်အသစ်ကိုအနည်းဆုံးငါးနှစ်မှဆယ်နှစ်တိုင်အောင်သင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ မွမ်းမံမှုများမရှိပါ တီဗီအသစ်တစ်ခုမဝယ်ခင်သဟဇာတဖြစ်မှု။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာရုပ်မြင်သံကြားအသစ်ဝယ်တဲ့အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အရာတွေရဲ့နောက်ဆုံးကိုရောက်လာတယ်။ ဗီဒီယိုသည်ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ် ဦး ကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားရန်အရေးကြီးသကဲ့သို့နောက်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံး၌မူအရေးပါသည်မဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်ပြားများ၏တိုးတက်သောပါးလွှာနှင့်အတူ ပီ၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချခဲ့သည် (၄၊ ၅ လက်မမှ ၂.၅ သို့ ၃ လက်မအထိလက်ရှိမှတ်တိုင်၏) ရလဒ်မှာရှင်းနေပါသည်။ အသံကမကောင်းဘူးနှင့်ဘေ့စ်မရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအသံသည်ပျက်ပြားသွားသည်။ ဆာဗာသည်နားမကြားသော်လည်း၎င်းကိုပြသည်။
အကျိုးဆက်အားဖြင့်ဤကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နေသောပြproblemနာအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေမှာဖြစ်သည် အသံစနစ်ကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘတ်ဂျက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုယူထားကြပါစို့, အသံမျှော်စင်၊ အသံဘားနှင့် WiFi သို့မဟုတ် Bluetooth မှတဆင့်ကြိုးမဲ့စနစ်ပင်။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပြီးအလွန်ကောင်းသောအရည်အသွေးရှိသည်။ သင့်မှာပြnotနာမရှိဘူးဆိုတာသေချာအောင်ဆက်သွယ်မှုတွေအကြောင်းပြန်ပြောပြပြီး TV အသစ်မှာ optical audio output၊ analog RCA နဲ့ HDMI ARC ရှိတယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်။ ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » တီဗီများ » ဘယ် TV ကို ၀ ယ်ရမလဲ (ကောင်းကောင်းရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုချက်များ)
Antonio Pisa ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်အသံအမြင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကိုအလွန်နှစ်သက်မြတ်နိုးသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Samsung 4k ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အဆင့်မြင့်ပရိုဂျက်တာရှိသည်။ အကောင်းဆုံးဆိုသည်မှာကောင်းမွန်သောပရိုဂျက်တာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကွန်ပျူတာနှင့်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်ဖြင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပြားဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည့်အခါမျက်နှာပြင်မှာ ၈၀ ဖြစ်သည်။ လက်မ, နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံကနေ, အကောင်းဆုံးရူပါရုံကို 80 ဒီဂရီကျော်တစ်ထောင့်တွင်တီဗီသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ထားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် ATTENTION, အကောင်းဆုံးရူပါရုံကို, အပြာ - အဖြူ, အပြာ - အဖြူရောင်တီဗီသို့မဟုတ် projector ကိုနောက်ကွယ်မှအလင်းသို့မဟုတ်အလင်းအိမ်ထားခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည် ဦး နှောက်နှင့်မျက်လုံးများနှင့်ကြမ်းခင်းမီးလုံးများကိုကျွန်ုပ်တို့နွေးထွေးသောအလင်းဖြင့်ထိုင်နေသောနေရာတွင်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်မီးခွက်များကိုမမြင်ရပါကစမ်းသပ်မှုပြုနိုင်သည်။
antonio pisa အားစာပြန်ပါ
အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်! နှင့်အလွန်ခဲယဉ်း။ ဒါဟာစမ်းသပ်ခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ စာဖတ်သူများထံမှအကြံဥာဏ်များထပ်မံကျဆင်းခြင်းရှိ၊ မရှိကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုကြပါစို့။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!
Piccolo Nene ဟုသူကပြောသည်
၂၀၁၇ ခုနှစ်အကုန်တွင် ၅၅ လက်မထက်ငယ်သော Oled ရုပ်မြင်သံကြားစက်များမရှိသေးကြောင်းမည်သို့ပြောနိုင်သနည်း။
Piccolo Nene အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မျှော်လင့်ဤအကြံပြုချက်များအထောက်အကူပြုဖြစ်ကြသည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ!
TSMC သည် 3nm chip ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပြင်ဆင်သည်